Shirkadaha caawiya dadka laxaadka la' oo laaluusha macmiishooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkadaha caawiya dadka laxaadka la' oo laaluusha macmiishoodaFoto: Janerik Henriksson, TT
Shirkadaha caawiya dadka laxaadka la' oo laaluusha macmiishooda
La daabacay måndag 12 januari 2015 kl 12.00
Shirkadaha u shaqeeya dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay ayaa inta badan laaluul siiya macmiishooda, si ay u helaan macmiil badan. Shirkadahan loo yaqaano Assistansbolagen, ayaa qofka curyaanka ah shaqaale uga dhiga qof ka mid ah qoyskiisa, waxaanay had iyo jeer laaluush siiyaan qofka
curyaanka ah iyo qaraabadiisa si aanu qofku uga tagin ama ugu wareegin shirkad kale. Tani waxa ay keentay in qofka loo shaqaynayaa aanu caban karin maaddaama oo la laaluushay. Waxyaabaha ay inta badan dadka ku laaluushaan waxa ka mid ah koombuyuutarro, lacago iyo safarro gaagaaban oo dalxiis ah.
Qofka u baahan saacado badan oo la caawiyo maalintii, waxa ay shirkadahani ku helaan 300 000 karoon oo faa’iido ah sannadkii.
Johanna Skinnari oo ah sarkaalad ku xeeldheer cilmiga danbiyada, kana tirsan haayadda Brottsförebyggande rådet, oo cilmi-baadhis ku samaysay arrintan ayaa tidhi;
- Dhibaatada uu laaluushkani leeyahay waxa weeye, iyada oo lacago la siinayo dadka u shaqeeya qofka curyaanka ah, si aanay uga wareegin shirkadda. Taasina waxa ay qarinaysaa in ay cabasho ka muujiyaan adeegyada liita ee shirkadda iyo sida loo caawiyo qofka laxaadka la'. Waxyaabaha ay inta badan dadka ku laaluushaan waxa ka mid ah koombuyuutarro, lacago iyo safarro gaagaaban oo dalxiis ah. Taasina waxa ay suurogalinaysaa in shirkadaha danbiilayaasha ahi wali sii shaqeeyaan.